Top 3 Photo Editor maka Blackberry - Best Blackberry Photo égwu
> Resource> Atụmatụ> Top 3 Best Photo Editor maka Blackberry
Edezi photos na mkpanaka gị na ekwentị mkpanaaka bụ fun na-adaba adaba. Ọ bụrụ na ị nwetara a Blackberry ekwentị na chọrọ dezie photos na ekwentị mkpanaaka gị, i nwere ike mkpa ụfọdụ dị ike foto editọ Blackberry.
E nwere nza nke foto edezi ngwa ọdịnala n'ihi Blackberry foto edezi. Ha niile bụ ndị mfe na fun iji. N'etiti ha, e nwere ụfọdụ n'ezie oké Blackberry foto edezi ngwa ọdịnala na pụrụ inyere gị aka mee ka gị na photos ọzọ mara mma na-akpali.
Ebe a n'elu 3 kasị mma foto edezi ngwa ọdịnala n'ihi Blackberry na-atụ aro. Ka nwere anya na ndị kasị ewu ewu na n'elu Blackberry foto edezi ngwa.
Photo nchịkọta akụkọ nke Blackberry 1: Obere Agba
Obere Agba abịa na ụfọdụ oké foto edezi atụmatụ. Ọ enye gị ohere tinye clip nkà gị foto brighten foto gị ozugbo. I nwekwara ike iru gị creativity site na-agbakwụnye Ụfọdụ akụkụ ihe odide na-atọ ọchị balloons na ihe oyiyi na-eme ka ha ọzọ ahaziri na-akpali. Common foto edezi ọrụ dị ka cropping, zooming, wdg na-nyere na nke a Blackberry foto edezi ngwa. Ọ na-nabatara mbido foto editọ ndị chọrọ ka nwere ụfọdụ fun na photos.
Photo nchịkọta akụkọ nke Blackberry 2: Foto dị Ime Anwansi
Foto dị Magic bụ a mma ọgaranya foto edezi ngwaọrụ nke Blackberry cell igwe na ihuenyo mmetụ akwado. Ọ enye gị ohere tinye akụ, na-akpa ọchị anya, iko, onwunwu ọla, balloons, weird masks, ajị ihu, ederede na okwu balloons gị photos. Dị nnọọ na-akpa gị pụrụ ichetụ n'echiche na ndị a niile edezi ọcha! Ọzọkwa, ị pụrụ ime ka ahaziri kaadị ekele na n'ihu na nke a Blackberry foto nchịkọta akụkọ.
Photo nchịkọta akụkọ nke Blackberry 3: Doodle
Doodle awade 16 na agba na 4 ahịhịa nha n'ihi na ị na-eme mkpịsị aka sere kpam kpam. Nkịtị foto edezi mmetụta dị ka invert agba, Gray ọnụ ọgụgụ, Infrared, Sepia, wdg-nyere ose elu gị ihe oyiyi. Nke a foto nchịkọta akụkọ nke Blackberry na-ama ama site okike ndị na-amasị-ewere foto na ịbịaru.
Olee otú Archive Facebook Ozi?